Ny fomba hitazonana ny tetikasa amin'ny fotoana - ITS Tech School
Efa ela ny siansa dia nampiseho fa afaka manao zavatra iray isika amin'ny fotoana rehetra. Ny tena mahavariana dia afaka manao asa ara-psikolojika tokana ihany isika ary mandrindra hetsika ara-tsaina iray monja amin'ny fotoana rehetra: afaka miresaka na mamaky isika fa tsy manao na inona na inona. Isika dia afaka mieritreritra hevitra iray amin'ny fotoana iray voafaritra, ary arakaraky ny ahafahantsika miova amin'ny fanombohana amin'ny zavatra iray ary amin'ny manaraka, arakaraka ny handoavana ny fahaiza-manaontsika.
Tao amin'ny 2001, Joshua Rubinstein, Ph.D., Jeffrey Evans, Ph.D., ary David Meyer, Ph.D., dia nitarika sy nizara fanadinana efatra izay nifanakalozan'ireo zatovo tanora eo anelanelan'ny fikarakarana isan-karazany, ohatra, mikarakara matematika na famolavolana lahatsoratra geometrika. Nahita ny zava-baovao momba ny asa rehetra:
Ireo mpikambana dia nanam-potoana rehefa nila niova izy ireo nanomboka tamin'ny asa iray ary avy eo ny manaraka.
Rehefa niha-sarotra kokoa ireo andraikitra, dia nandany fotoana fanampiny ireo mpikambana nanatanteraka azy ireo.
Noho izany, dia naharitra ela ny olona mba hifanelanelana ireo fitarainana miavaka.
Ny fandaniam-potoana dia nohajaina kokoa rehefa niova ho an'ireo orinasam-panjakana vaovao ireo mpikambana.
Ilaina ny manintona ny tenantsika lavitra ny asa indraindray; Mazava ho azy fa manome torolalana momba ny tenako aho mandritra ny minitra 25 mba handraisako azy, arahin'ny five-minitra fohy, arahin'ny minitra hafa 25 (avereno mandra-pahavitan'ilay rahampitso). Fanavahana dia zavatra iray, na izany aza ny fanodikodinana hafa. Fohy ny fijanonany, mandalo ary mieritreritra. Misintona antsika ny fisaratsaraham-bazana ary mamotika tanteraka ny fanendrena antsika.
Nilaza i Meyer fa na dia ny sakana tsy azo antoka aza dia mety hilefitra amin'ny 40 isan-jato amin'ny fotoana mahasoa. Toa tsy mety hitranga ny fahafahantsika mifantoka indray ny kolontsain'ny fikambanana mba hahafantarana ireo hatsarana amin'ny famandrihana sy famaranana ny raharaha iray alohan'ny hanombohana hafa.
Noho ny tsy fahafaha-manaon'ity fitondran-tena ity dia tsy azo ihodivirana sy tsy misy dikany, inona no azontsika atao mba hanatanterahana ny adidintsika ara-potoana? Angamba ny valiny mety dia sehatra tsy miankina amin'ny fampiasana ny fidiram-bola sy ny fidiram-bola.
Fametrahana Fahaleovan-tena sy teknika mahomby
Ny fialan-tsasatra ny fotoana amin'ny hetsika dia matetika atao amin'ny fampiasana teboka manilika dia nahitana ny marina sy ny tsara indrindra. Ny tranga tsara indrindra, ny fanombanana manokana dia manome antsika ny mety ho vitan'ny 50 isan-jato. Azontsika atao ny manangana ireo tombontsoa roa ireo isaky ny misolo tena ny fahafahana miditra amin'ny vola ary ny fahombiazany ara-dalàna, izay nianarantsika tamin'ny alàlan'ny fanadihadiana dia eo anelanelan'ny 72 ka hatramin'ny 74 isan-jato. Hifanaraka amin'ny 70 isan-jato aho noho ny tsy fahampiana.
Ao amin'ny Equation 1 izay mitaky izany, dia miresaka amin'ny teny hoe, dia miresaka amin'ny fepetra fampiasana izay andrasana hamaranana ilay tetikasa, dia miresaka amin'ny fahafahana miditra ny vola ary p miteny amin'ny tombombarotra mahazatra ny fitohanan'ny mpametam-baovao. Fomba fanao 2 ho an'ny d.
Equation 1. Manombana marimaritra iraisana amin'ny fampiasana ny fahafaha-manao sy ny vokatra
Equation 2. Manombana marimaritra iraisana amin'ny fampiasana ny fandaharam-potoana sy ny vokatra vokatra
Condition 2. Manombana marimaritra iraisana amin'ny fampiasana ny fandaharam-potoana sy ny vokatra vokatra
Ireo kalitao amin'ity fomba fiasa ity
Io fomba fanao io dia mahasoa rehefa mahafeno fepetra avo lenta ny ora omena ary ny asa dia tena ara-dalàna sy mora azo.
Fohy noho izany fomba izany
Isika manontolo dia mahafantatra ny maha-sahiran-tsaina azy amin'ny ankamaroan'ny olona maneho, miaraka amin'ny tsy fitovian-kevitra, ny fisian'ny hetsika fisehoan-javatra. Ny fifadian-kanina, na ny fifanakalozam-pifandraisan-davitra, dia mirona amin'ny kolotsaintsika haingana. Koa satria ity toe-tsaina sarotra ity dia tsy mora miova, tokony hampiasa matematika probabilistic isika.
Misy fomba maro handalinana ny fotoana ary ny sasany dia mazava kokoa noho ny hafa. Miaraka amin'ny vulnerable avokoa izy rehetra. Miezaka ny manamboatra ny firoboroboantsika isika amin'ny fanombantombanana ny endrika tsara indrindra, izay mahatonga ny fahasarotana ny miomana amin'ny fisainana voajanahary ao anatin'ireo fandinihana ireo. Ny toe-javatra tsara indrindra, ny tarehin-tsoratra tokana dia hanome antsika 50 isan-jato ny fahombiazan'ny fahombiazana. Azontsika atao ny manitatra ireo tombontsoa ireo amin'ny alàlan'ny fakana an-keriny eo ambanin'ny fepetra tsara indrindra sy ny fomba tena mahavariana mahatsikaiky, ankoatra ny fahafaha-miditra sy ny vokatra azo avy amin'ny famatsiam-bola.